ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဇွန် ၂၀၀၈
ဖတ်လို ဂရိ ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ဘိုင်ကိုးလ် မြန်မာ ရိုမေးနီးယား ဟီလီဂေနွန် အင်္ဂလိပ် အီတလီ
မီးငရဲအယူဝါဒကို ယုံကြည်သူတချို့သည် မာကု ၉:၄၈ (သို့မဟုတ် အခန်းငယ် ၄၄၊ ၄၆) တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော ယေရှု၏စကားကို ထောက်ပြကြသည်။ ယေရှုသည် မသေသောပိုးနှင့် မငြိမ်းသောမီးအကြောင်း မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုစကားများနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ယောက်ယောက်ကမေးလာခဲ့လျှင် သင်မည်သို့ရှင်းပြမည်နည်း။
အသုံးပြုသည့်ဘာသာပြန်ကျမ်းအပေါ်မူတည်၍ လူတစ်ဦးသည် အခန်းငယ် ၄၄၊ ၄၆ သို့မဟုတ် ၄၈ တွင်ဖတ်မိပေမည်၊ အကြောင်းမှာ အချို့သောဘာသာပြန်ကျမ်းများတွင် ထိုအခန်းငယ်သုံးခုကို ထပ်တူစကားမျိုးဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ * ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန်ကျမ်းတွင် ဤသို့ဖတ်ရသည်– “သင်၏မျက်စိသည်လည်း သင့်ကိုမှားယွင်းစေလျှင် ထုတ်ပစ်လော့။ ဂေဟင်နာအရပ်သို့ မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှင့် ရောက်သည်ထက် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ မျက်စိတစ်ဖက်နှင့် ဝင်ရခြင်းသည် သာ၍ကောင်း၏။ ထိုဂေဟင်နာသည် ပိုးမသေ၊ မီးမငြိမ်းရာအရပ်ဖြစ်၏။”—မာ. ၉:၄၇၊ ၄၈။
မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ အချို့သူများသည် ယေရှု၏ထိုဖော်ပြချက်က သေပြီးနောက် ဆိုးညစ်သောဝိညာဉ်သည် ထာဝစဉ်ညှဉ်းဆဲခံရသည်ဆိုသည့်အချက်ကို ထောက်ခံကြောင်း အခိုင်အမာဆိုကြသည်။ ဥပမာ၊ စပိန်နိုင်ငံ နဗားရ်တက္ကသိုလ်မှ စာအုပ်တစ်အုပ် (Sagrada Biblia) တွင်ပါသောမှတ်ချက်တွင် ဤသို့ဆို၏– “ကျွန်ုပ်တို့သခင်သည် ညှဉ်းဆဲရာငရဲကို ရည်ညွှန်းရန် [ထိုစကားများ] ကိုအသုံးပြုသည်။ ‘မသေသည့်ပိုး’ ကို ငရဲကျခံရသူတို့၏ အဆုံးမရှိဝမ်းနည်းပူဆွေးရသည့်အဖြစ်နှင့် ‘မငြိမ်းနိုင်သည့်မီး’ ကို ကာယပိုင်းနာကျင်မှုခံစားစေသည့် အပြစ်ဒဏ်အဖြစ် ရှင်းပြလေ့ရှိသည်။”
သို့သော်၊ ယေရှု၏စကားများကို ဟေရှာယ၏ပရောဖက်ပြုချက် နောက်ဆုံးအခန်းငယ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ * ယေရှုသည် ဟေရှာယ အခန်းကြီး ၆၆ ပါကျမ်းချက်ကို ရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ “တစ်ချိန်က လူသားယဇ်များကိုပူဇော်ခဲ့ပြီး (ယေ. ၇:၃၁) နောက်ပိုင်း ယေရုရှလင်မြို့၏အမှိုက်ပစ်သည့်နေရာဖြစ်လာသည့် ဟိန္နုံချိုင့် (ဂေဟင်နာ) ပတ်ဝန်းကျင်သို့” ထွက်သွားခြင်းကို ပရောဖက်က ရည်ညွှန်းနေပုံရသည်။ (The Jerome Biblical Commentary) ဟေရှာယ ၆၆:၂၄ ပါသရုပ်ဖော်ချက်မှာ ညှဉ်းဆဲခံနေရသည့်လူများကိုမဟုတ်ဘဲ လူသေကောင်များအကြောင်းကို ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်မှာ ထင်ရှားသည်။ မသေသည့်အရာမှာ အသက်ရှင်သည့်လူသားများ သို့မဟုတ် မသေနိုင်သောဝိညာဉ်မဟုတ်ဘဲ ပိုးများကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင် ယေရှုစကားများ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ အဘယ်နည်း။
စပိန်ကက်သလစ်စာအုပ်တစ်အုပ် (El evangelio de Marcos. Análisis lingüístico y comentario exegético, Volume Ii) တွင် မာကု ၉:၄၈ နှင့်ပတ်သက်သည့်မှတ်ချက်ကို သတိပြုပါ– “[ထို]စကားစုကို ဟေရှာယ (၆၆,၂၄) မှကောက်နုတ်ထားသည်။ ပရောဖက်သည် လူသေကောင်များကို ပျက်စီးစေသည့် နည်းလမ်းနှစ်ခုဖြစ်သော ပုပ်ပျက်ခြင်းနှင့် မီးရှို့ခြင်းကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ . . . ကျမ်းချက်တွင် ပိုးနှင့်မီးကို ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားခြင်းက ဖျက်ဆီးခြင်းအယူအဆကို ပို၍ခိုင်ခံ့စေသည်။ . . . အဖျက်စွမ်းအားနှစ်မျိုးစလုံးကို အစဉ်အမြဲ (မငြိမ်းနိုင်၊ မသေနိုင်) အနေဖြင့်ပုံဖော်ထားသည်၊ ၎င်းတို့ထံမှ လွတ်မြောက်ရာလမ်း မရှိပါ။ ထိုဖော်ပြချက်တွင် မပျောက်မပျက်ဘဲကျန်ရစ်သည့်အရာမှာ ပိုးနှင့်မီးသာဖြစ်သည်၊ လူမဟုတ်ပါ၊ ထို့ပြင် ၎င်းတို့၏ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းအတွင်းသို့ကျရောက်လာသည့် မည်သည့်အရာကိုမဆို လုံးလုံးဖျက်ဆီးပစ်သည်။ ယင်းကြောင့် ထိုဖော်ပြချက်သည် ထာဝစဉ်ညှဉ်းဆဲခံရခြင်းကိုမဟုတ်ဘဲ လုံးလုံးဖျက်ဆီးခံရခြင်းကို ပုံဆောင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုကဲ့သို့ဖျက်ဆီးခံရသည့်အခါ ဘယ်သောအခါမျှ ပြန်ရှင်လာမည်မဟုတ်၊ ထိုသူတို့၏သေခြင်းသည် ထာဝစဉ်ဖြစ်သည်။ [မီး] သည် လုံးလုံးပျက်စီးသွားခြင်း၏ အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။”
စစ်မှန်သောဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှင်၊ တရားမျှတရှင်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိသူမည်သူမဆိုသည် ယေရှု၏စကားများကို အထက်ဖော်ပြပါပုံစံအတိုင်း နားလည်ခြင်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လှကြောင်း သိမြင်နိုင်မည်။ ဆိုးသွမ်းသူများသည် ထာဝစဉ်ညှဉ်းဆဲခံရမည့်အကြောင်း ယေရှုပြောနေခြင်းမဟုတ်ခဲ့ပါ။ ယင်းအစား၊ ထိုသူတို့သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမျှော်လင့်ချက်မရှိသည့် လုံးလုံးဖျက်ဆီးခြင်း ခံရနိုင်စရာအကြောင်းရှိသည်။
^ အပိုဒ်၊3အားအထားရဆုံး ကျမ်းလက်ရေးစာမူများတွင် အခန်းငယ် ၄၄ နှင့် ၄၆ မပါဝင်ပေ။ ထိုအခန်းငယ်နှစ်ခုကို နောက်ပိုင်းတွင် ထပ်ထည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျမ်းပညာရှင်များက အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ပါမောက္ခ အာချီဘော့လ် တီ. ရောဘတ်စန်က ဤသို့ရေးသည်– “ရှေးအကျဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး လက်ရေးစာမူများတွင် ထိုအခန်းငယ်နှစ်ခု မပါဝင်ပါ။ ထိုအခန်းငယ်များသည် အနောက်တိုင်းနှင့် ဆီးရီးယား (ဘိုင်ဇန်တိုင်း) အုပ်စုမှ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၎င်းတို့သည် အခန်းငယ် ၄၈ ကိုထပ်ကျော့ခြင်းသက်သက်မျှသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အစစ်အမှန်မဟုတ်သော အခန်းငယ် ၄၄ နှင့် ၄၆ ကိုကျွန်ုပ်တို့ [ချန်ထား] သည်။”
^ အပိုဒ်၊5“ထိုသူတို့သည် ငါ့ကိုပြစ်မှားသောသူတို့၏ အသေကောင်များကို ထွက်၍ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်။ သူတို့၏ပိုးသည် မသေနိုင်ရာ။ သူတို့၏မီးသည်လည်း မငြိမ်းနိုင်ရာ။ လူသတ္တဝါအပေါင်းတို့၌ ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။”—ဟေရှာ. ၆၆:၂၄။
အဘယ်အရာများမှ ကျွန်ုပ်တို့ ထွက်ပြေးရ
သင့်ယုံကြည်ခြင်းကို ခုခံကာကွယ်ရန် အသင့်ရှိပါသလော
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇွန် ၂၀၀၈
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇွန် ၂၀၀၈